Boqolaal Somali ah, oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan dawlada Somaliya oo lagu xiray Kenya. – Radio Daljir
Nairobi, Jan 18 – Ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Nairobi ka qabqabtay oo xirxiray boqolaal Soomaali ah oo iskugu jira xildhibaanno ka tirsan baarlamaabka Soomaaliya, mas?uuliyiin horay uga tirsanaan jiray saraakiishii ciidanka Soomaaliya iyo dad shacab ah oo aad u tiro badan.
Dadka ay qabqabteen ciidamada amniga ee dalka Kenya habeenkii xalay ahaa, ayaa waxaa ku jira ku dhawaad 30 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dawladda KMG ah ee Soomaaliya, saraakiil ka tirsanaan jiray ciidankii Soomaaliya oo uu ka mid yahay Gen. Maxamed Nuur Galaal, carruur, habeen, odayaal da?ah iyo dad dhallinyaro ah oo dhammaantood laga qabqabtay xaafadaha kala duwan ee magaalada Nairobi.
Dadka la raafay badankoodu waxay haysteen fiisooyin iyo sharciyo ogalaanaya sii joogitaanka dalka Kenya, waxaana ma?uuliyiinta la xirxiray intooda badana intaas u sii dheeroo ay wataan baasabooro dalal kale oo adduunka ah.
Xildhibaannada lagu daray dadka laga aruurshay xaafadaha magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ee ay Soomaalidu degto, oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in aysan garanayn sababta xarigooda, iyo halka ay ku danbayndoonaan.
Xilliga ciidanka amnigu ay dadkaan xirxirayeen waxay ahayd xilli habeennimo ah oo dadka qaarkiis ay hurdeen, waxaana loogu dhacay xildhibaannada qaarkood hoteelladii ay jifeen.
Ma jir wax war ah oo ka soo baxay dawladda Kenya oo ku saabsan sababta dadkaan loo raafay, hase ahaatee waxaa loo badinayaa qabqabasha dadkaani in ay la xiriirto bannaanbixii ka dhacay magaalada Nairobi, kaasi oo dawladda Kenya ay ku aadaysay in ay ka danbeeyaan ururka Al-shabaab.